Nidaamka Raadiyaha Gaarka ah ee Metrobus: Radybus | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulNidaamka Raadinta Metrobus-Specific:
Nidaamka Raadinta Metrobus-Specific:
09 / 04 / 2012 34 Istanbul, DUNIDA, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
Nidaamka raadiyaha gaarka ah ee u dhaxeeya BRTs, Miis Caddaan Moobaylka iyo 3 kun bas oo cusub ayaa ah qaar ka mid ah ... Halkan waxaa ah Istaraatiijiyadda gaadiidka iyo adeegga moobiilka ee Madaxweynaha:
METROBUS SIDA LAGA HELAY CODSIGA:
IstanbulWaxaan sidoo kale rabnaa inaan xallino nidaamka gaadiidka. Taasi waa kuwa ugu baahida badan. Marka aynu qiimeyno metrobus,300-400 kama badna kumanaan rakaab ahWaxaan la leh. Waqtigan xaadirka ah tirada rakaabka ayaa gudbay kumaan kun. BeylikdüzüTirada rakaabku waxay gaari doonaan 1 million. Wali ma dhicin kartid waqtiyada waqtigaan. Ma gelin kartid baska 300 kale. Nidaamku ma daboolayo. Qaab-dhismeedka Qatar-5-6 waa inuu si lama filaan ah u yimaadaa si ay hal kun oo qof oo 500 ah ay u helaan iyo ka baxaan. Sababtoo ah waxaan rabaa inaan helo, iyo dadku waa sugayaan. Nidaamka ayaa dhib badan. Taasi waa sababta aan shaqo cusub u qabtay. Gaar ahaan, xiriirka ka dhexeeya basaska iyo darawalada ayaa lagu dhisi doonaa basaskaas. Chips iyo metrobus waa la kormeerayaa bartamaha, masaafada u dhexeysa labada gawaarida, wakhtiyada kala duwan ayaa dhammaantood lagu xirayaa nidaamka.
Ma jiri doonaan isku xirnaanshaha baska:
Isticmaalka gaadiidka tayada lehugu yaraan 3 kun gaadiidka baska. Our Goal, Istanbulkordhinta tirada basaska, si aysan basku u dhaafin awoodda rakaabka caadiga ah xitaa saacadaha ugu sarreeya subaxa iyo fiidkii. Lambarka caadiga ah; Tirada rakaabka rakaabka waa laba jeer tirada dadka fadhiya. Tani waa basas caadi ah oo raaxo leh. Maareeyaha Guud ee IETTWaa maxay,Sidaa awgeed, kordhin tirada basaska iyo ka dhig basaska raaxada ilaa 2013. 2 kun bas oo aan ku filneyn, 3 kun bas oo aan ku filnayn, hel 4 kunWaxaan is-idhi. Xilligan, 2 bin 800ü Waxaa jira ku dhawaad ​​kun bas oo ah 5 oo ay ku jiraan IETT. Target 7 kun bas oo Ö SCT ku saabsan shidaalkaWaxaan dooneynaa in laga saaro. Way ka roon tahay basaska gaadiidka. Ma kici kartid, kharashyada waa cad. SCTWaa ka fiican tahay in kor loo qaado.
TABABARKA MOBILEED HESHIIS QAATO AH:
Dhibaato lagu arkay Istanbul, saboolnimada adoo soo jiidaya telefoonnada gacanta oo leh muuqaal navigation, sawirka Muuqaalka Cadaankaama u diri doono. In barnaamijka,Alo 153 Miiska Cadaanka ahWaxaa jira qayb. Khariidadu waxay muuqan doontaa. Waxaad ku ogaan kartaa meesha aad ku jirto khariidada oo aad soo gudbiso codsigaaga. Waxaad ka qaadataa sawirada dhibaatooyinka, shilalka waddooyinka, iyo jawaabo deg deg ah oo ka yimaada xarunta. Si kale haddii loo dhigo, dhibaatada ay muwaadiniintu u arkaan nidaamkan, ayaa u diraya xarun sawir leh. Xarunta, kooxaha cutubka ku haboon ayaa lagu hagaajin doonaa, dhibaatana waa la xallin doonaa. Kadibna Istanbulama in lagu wargeliyo. Sidaas darteed, is-xakamaynta ayaa la bixin doonaa. Waqtigan xaadirka ah ee adduunka ayaan nahay degmada oo isticmaala tiknoolajiyada ugu fiican.
Nidaamkaan, qof waliba wuxuu ku leeyahay magaalada. Sababtoo ah magaalada waa meel aad u weyn. Waxaan ku noolnahay qarnigiias oo aan ahayn oo kaliya magaalada iyo dalka, laakiin xitaa aduunka, dadka oo dhan waa isku xiran yihiin. Dadka deggan Istanbul waxay ku jiraan xaalad isku mid ah. Waxay saamayn kartaa natiijada qofka qaladkiisa, xitaa dadka ku nool wadan kale oo adduunka ah. Mashruucaan, muwaadinka hadda waa indhahayaga iyo dhegahayaga. Tani waa dareenka muwaadinimada magaalo casri ah. mar dambe hello telefoonka Ma aha qaab muuqaal ah oo sawirada xasaasiga ah, u dir degmada.
Source: News Partner
Goobta cabashada gaarka ah ee Metrobus
Cufnaanta khibrada leh ee maaddooyinka dhuxusha waxaa lagu xallin doonaa raadiyaha raadiyaha
Raadiyaha si qaylo dheeraada ugu sheeg shaxda ugu dheer BRT
Wasiirka Arimaha Dibadda ayaa booqday dhismaha TV-ga Tower-Kulmiye ee Chamlia
Camlica TV-Kulanka 2019 oo la furayo July
Madaxa Gökçek oo ka socda Telerferikik Metrobüse Bineceğiz ayaa sidaas yidhi.
Madaarka Bursa-Yenişehir-Inegöl oo u dhexeeya khadka YHT adoo isticmaalaya qeyb ka mid ah khadka tareenka ayaa la samayn karaa?
YHT wax ka barato bartamaha Izmit